Jarista Xaafadda Yakut ee Tareenka Xirmooyinka ayaa la nasan doona iyada oo la adeegsanayo Isugeyn | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia38 KayseriJarista Xaafadda Yakut ee Wadada Tareenka waxay la degganaan doontaa xariiqda Jaangooyooyinka
16 / 03 / 2020 38 Kayseri, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, TURKEY
Dariiqa qurxinta leh ee laga gooyay wadada tareenka ayaa la degi doonta marinka dhulka hoostiisa mara
Xaafadda Yakut, oo ay goyso khadka tareenka, iyo xaafadaha ku xeeran ayaa neef qaadanaya. Duqa Degmooyinka Magaalada Kayseri Memduh Büyükkılıç wuxuu cadeeyay inay ka shaqeynayaan sidii ay muwaadiniinta uga dhigi lahaayeen mid si raaxo leh oo raaxo leh ku dheehantahay dhanka gaadiidka wuxuuna ku dhawaaqay in mashruuc marin hoosaad ah laga hirgalin doono halka ay isku xiri doonaan Yakut Neighborhood iyo Fuzuli Junction, kaas oo xariga ka jaraya khadka tareenka.
Qoraalkiisa, Duqa magaalada Büyükkılıç wuxuu xusay in gaadiidku ay ka mid yihiin ajendaha ugu muhiimsan ajendaha soo koraya ee ka jira magaalada Kayseri.
Isagoo tilmaamay inay wadaan daraasado ku saleysan qanacsanaanta muwaadiniinta ee dhammaan gobollada magaalada ee bixiya horumarka isla markaana kordhiya tirada dadka, ayuu Büyükkılıç wuxuu sheegay inay rabaan in xaafada Yakut, oo ay gaadheen in kabadan 10 kun oo qof, inay la jaan qaadaan magaalada oo ay gaaraan gaadiid aad u fudud xaafadaha ku hareereysan.
Isagoo ku nuuxnuuxsanaya in Dawladda Hoose ee Magaaladu ay shaqo ka bilaabatay wadada dheer ee dhererkeedu yahay 1.5 kiiloomitir isla markaana wadada laamiga ah la dhisay, ayuu yiri Büyükkıl,, “Maaddaama wadadu isku xirto khadka tareenka ee gobolka, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo marin isgoys ah oo isku xirta Yakut Mahallesi iyo Fuzuli Avenue. Kulamo deg deg ah oo wax ku ool ah ayaa lala yeeshay Agaasinka Guud ee Wadooyinka. Iyada oo caqligal ah 'raacitaanka ganacsiga Kayseri', waxaa la go'aamiyay in diiradda la saaro arrinta iyada oo go'aan laga gaadhayo iyo in la sameeyo is-hoosaysiinta TCDD iyada oo loo eegayo dariiqa saxda ah ee Maareeyaha Guud Cali Uhsan Uygun. Mawduuca waxaa lagu daray barnaamijka maalgelinta ee TCDD iyo daraasadaha mashruuca ayaa la bilaabay. Waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo Maareeyaha Guud ee TCDD Ali İhsan Uygun iyo qaybaha kale ee daneynaya. Howlaha ka hortagga dembiyada ayaa sida ugu dhakhsaha badan looga bilaabi doonaa gobolka halkaas oo kooxaha magaalooyinka waaweyn ay ka sii wadaan howlahooda dhismaha waddada.
Duqa magaalada Büyükkılıç ayaa tilmaamay in culeyska taraafikada ee saaran Mustafa Kemal Pasa Boulevard la dhimi doono mashruucan, kaas oo sidoo kale kordhin doona isdhaxgalka u dhexeeya waqooyiga iyo koonfurta magaalada, gaadiidkuna wuxuu noqon doonaa mid si dhakhso badan oo raaxo leh wadada cusub oo leh dhexroor 30 mitir ah.
Saddexdii Sebtembar ee Sebtembar waxay gaadhsiisay jidka tareenka lugta
Xagga sare ee dadku maro ee ku yaala xaafada Sazli Soke
Cennet Quarter oo jidka lugta ah ayaa la furaa bisha Sebtembar
Waxay rabaan inay xaafaddooda ka buuxaan xaafad ay tareenku maraan
Deeqa Waxbarashada Asphalt ee Suuqa Deegaanka